Kambani Yedu - Wavelength Opto-Electronic
Wavelength Opto-Electronic (S) Pte Ltd ndeye ISO 9001 yakasimbiswa kubvira 2004, ine bhizinesi redu rekutanga mukugadzira optics uye kugadzira laser optics, optical modules, yakaoma system customization uye LVHM inokurumidza prototyping.
Isu tinogadzira maindasitiri laser muchina process misoro yepasi rose laser application musika. Isu tinodyidzanawo mukutsvagisa nekusimudzira kwakadzama, tichigadzira diki-kusvika-hombe chiyero chakaomesesa yakaoma optical masisitimu uye tinopa QA/QC metrology mhinduro kune vatengi mumusika wepasi rose neSingapore.
Yedu Yakakosha Values ​​- ITEC:
Optics zvave zvechinyakare zvigadzirwa zvakasimba kubva pakuvambwa. Isu tinokwanisa kupa emhando yepamusoro laser optics, infrared optical zvigadzirwa uye yakazara yakazara masevhisi mumunda we optical tekinoroji. Nemidziyo yedu yepamberi nemichina yekugadzira, bvunzo & kuyerwa uye kudzora kwemhando, pamwe neruzivo rwakakura uye hunyanzvi hwekuziva kwedu kwemaziso, tinokwanisa kupa rutsigiro rwakanaka kumutengi anoda kugadzirisa maoptics nemalenzi. Isu tinoratidza yakakura hesera yekunze-pasherufu yakajairwa optical components, kusanganisira yakafara kusarudzwa kwemalenzi emaziso, optical mafirita, optical mirror, windows, prisms, beamsplitters, kana diffraction gratings. Isu takagadzirawo mamwe laser process misoro ine anoratidza magirazi, focal lenses, nozzle, gasi / mvura jeti iyo inofarirwa zvakanyanya kune laser system integrators. Isu tinogona kuendesa optics yedu uye laser process misoro kune chero chikamu chenyika mukati menguva pfupi yekuzivisa.
Sezvo isu tichivaka hwaro hwevatengi kubva pakutengesa yedu optical components, laser process heads uye inomiririra laser uye photonics zvine hukama zvigadzirwa, pamwe neyedu mumba hardware, software uye optical dhizaini dhizaini, izvi zvinhu zvinotitungamira kuti tipe zvakabatanidzwa mhinduro panzvimbo peyakajairwa discrete chikamu zvigadzirwa. NeSingapore Governments Grants inova yekutsigira mabhizinesi madiki epakati, tinokwanisa kusimbisa zviwanikwa zvedu uye kutora mapurojekiti mazhinji kubatsira vatengi kugadzirisa nyaya dzekushanda kwavo uye kuwedzera zvibereko zvavo. Mumakore mashoma apfuura, takabudirira kuita mukugadzira laser doppler vibrometers, compact digital holoscopes, laser calorimetry system, robotic laser process musoro, laser process MWIR monitoring system, IR ellipsometer system, nezvimwe. Neruzivo rwedu rwakakura mukutengesa & kushambadzira uye yakafara kugovera network, isu zvakare hep kutengesa zvimwe zvigadzirwa zvedu kubva kumapurojekiti
Mushure mekunge tagadzwa sevagoveri vane mvumo uye nzvimbo dzekudzidzisa mune dzimwe nyika dzeAsia nemakambani mashoma epasi rose anozivikanwa Optics & Photonics Design Software, isu takamisawo Distribution bhizinesi unit nekushanda nemakambani mazhinji anotungamira mulaser & Photonics arena. . Takabva tamisa kushanda kwakananga muThailand, Taiwan neKorea. Ticharamba tichigadzira mamwe mahofisi ekutengesa muAsia uye US. Isu tinoshandawo nevanotungamira vemuno Laser & Photonics chigadzirwa vanogovera kutengesa zvigadzirwa zvedu mumisika yeEurope neyeJapan.
Kuzvipira kune Vatengi
Hatidi kungova mumwe mutengesi wevatengi vedu, isu tinoda kuve shamwari yedu yebhizinesi shamwari. Kuburikidza nekubudirira kwavo ndiko kunoita kuti tibudirire uye tiwedzere kusimba.
Isu tinotora hanya zvakanyanya kuti titeerere kune zvinodiwa nevatengi vedu uye kana zvavanoda zvisiri izvo zvatakagadzira, isu tichatarisa kuti tione kana isu tiine hunyanzvi hwekuzvigadzirira ivo.
Isu tinovaka zvigadzirwa zvine vatengi mupfungwa.
Isu tichabata vatengi vedu sezvatinoshuvira kubatwa uye kuona kuti kudyidzana kwese kunoitwa nenzira inofadza uye nehunyanzvi.
Chinangwa chedu chekambani ndechekubvisa matambudziko evatengi nemhinduro dzedu kuitira kuti vawedzere zvigadzirwa zvavo.
SME100 Inokurumidza Kufamba Makambani muSingapore 2015
Singapore Institute of Manufacturing Technology Yakakosha Partner Mubairo 2017